Thunder Pa Yit'
လွှတ်တော်ထဲမှာ..တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေရှိနေသမျှ.. ဘင်္ဂံလီတွေ ပန်းရောင်ကဒ် ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုပြီး ဆိုပြီး...ပြောနေကြတာတွေကိုတွေ့တော့.. ရီရမလိုလို....ငိုရမလိုလို..ဗျာ..၊ ဟို .. ဘင်္ဂံလီ ၈ သိန်းကို ၀ှိုက်ဒ်ကဒ် စပေးခဲ့တာလည်း.. တပ်မတော်အစိုးရ လို့ပြောနေတဲ့အစိုးရကြီးလေ.. ပြီးတော့... တပ်မတော်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ပါတီကြီးလေ..၊ ဘင်္ဂံလီအမတ်ရွှေမောင်က ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ထဖြဲတုန်းက... ပြန်မပြောရဲတဲ့သူကြီးကလည်း.. စစ်တပ်က ဘိုးတော်ကြီးပါပဲ.. NLD နဲ့ ရခိုင်ပါတီက..နယ်စပ်လူဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့ အဆိုတင်တုန်းကလဲ.. ထထပြီး..ကန့်ကွက်တဲ့...ဘဲကြီးက.. အားလုံးသိတော်မူတဲ့အတိုင်း.. ဒုဗိုလ်မှုးကြီးဟောင်း ဦးလှဆွေ..ပါပဲ.၊ ဘင်္ဂံလီခရိုနီတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါမစ်တွေ... လက်မှတ်ထိုးပေးနေတဲ့..အဘ..ဆိုတဲ့ဘဲကြီးတွေဟာလည်း.. ဘယ်ကလူတွေပါလဲ..ဆိုတာသိကြမှာပါ..။ အခုဖေါ်ထုတ်ရင်..အခုတွေ့မှာပါပဲ...။ အဲဒီတော့.. တပ်မတော်သားတစ်မတ်သားကသာ.. အမျိုးသားရေး တကယ်တက်ကြွနေရင်.. အဲဒီအဘတွေအိမ်ကိုလွှတ်ပြီး. ၀င်သိမ်းခိုင်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..၊ လုပ်ရဲကြပါသလားခင်ဗျာ...။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:16 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook